ईन्टरनेट : महिला बद्नाम गर्ने थलो |
ईन्टरनेट : महिला बद्नाम गर्ने थलो
प्रकाशित मिति :2018-06-29 14:21:10
ललितपुर । भक्तपुरकी कविता खड्काले फेसबुक चलाउन थालेको २ वर्ष भयो । उनलार्ई च्यकजबल चयथ नामको फेसबुकबाट फ्रेण्ड रिक्वेस्ट आयो । खोलेर हेर्दा प्रोफाइलमा आफ्नै फोटो देख्दा उनी झस्किइन् ।
फेसबुकमा समेत आफ्नैै फोटो राखेको देख्दा उनलार्ई अचम्म लाग्यो । उनले हतपत्त रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिन् । तिमी को हो ? किन मेरो फोटो तिम्रो फेसबुकमा राखेको भनेर सोध्दा कुनै जवाफ आएन ।
लगत्तै म्यासेन्जरमा कल गरिन् । उसले कल रिसिभ गरेर कुरा गर्यो । मेरो फोटो किन राखेको भन्दै रिसाउँदा उल्टै अनेकथरी बोल्न थाल्यो । दिनहुँ आफ्नो फेसबुकमा राखेका फोटोहरू उसले शेयर गर्दै जाँदा उनलार्ई रिस उठ्यो । तर केही गर्न सकिनन् ।
कसलार्ई भन्ने, के गर्ने सोच्नुभन्दा आफूले केही गर्न नसकेको उनले बताइन् ।
काठमाडौंकी सुनिता थापा पनि फेसबुक चलाउन लागेको धेरै भयो । टाढा रहेका आफन्त, साथिभाईसँग कुराकानी गर्न आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू राख्न सकिने भन्दै उनले फेसबुक चलाउन थालिन् ।
एकदिन घरमा बसेर सँगै पढ्ने साथीसँग कुरा गरिरहेको साथीले उनको फेसबुकको पासवर्ड च्याटमा पठाए । उनी आफनो फेसबुकको पासवर्ड च्याटमा पठाउँदा अचम्म परिन् ।
भन्छिन्, ‘आफूले कसैलाई नदिएर गोप्य राखेको फेसबुकको पासवर्ड आफैलाई पठाउँदा अचम्म लाग्यो । मेरो पासवर्ड कसरी थाहा भो भनेर सोध्दा पासवर्ड पठाउने साथी भने हासिरह्यो । कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।’
लगत्तै उनले पासवर्ड चेञ्ज गरिन् । चेञ्ज गरेको भोलिपल्ट त्यही साथीले फेरि पासवर्ड पठायो । पटकपटक सँगै पढ्ने साथीले पासवर्ड ह्याक गरेको उनले बताइन् । साथीलार्ई कसरी पत्ता लगाउछौ भनेर सोध्दा अहिलेसम्म कुनै जवाफ नदिएको उनले सुनाइन् ।
साथीले पटकपटक आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड ह्याक गर्दा पनि कहाँ जाने, के गर्ने कसलार्ई भन्ने समेत थाहा नपाएको उनले बताइन् ।
महेन्द्रनगरको भिमदत्त नगरपालिकाकी १४ वर्षीया एक बालिकाले नजिकैको गाउँले दाईलार्ई सधै फेसबुक चलाउदै गरेको देखिन् ।
नजिकै घर भएको उसलार्ई दाई नाता लगाउदै दिनहुँ उनको फेसबुक उनी हेर्न थालिन् । फेसबुकमा फोटा राख्न सकिने, टाढाका साथीहरूसँग सजिलै कुरा गर्न सकिने थाहा पाउँदा उनलार्ई पनि फेसबुक चलाउने रहर जाग्यो ।
उनले ती दाइलार्ई फेसबुकको बारेमा सोध्न थालिन् । उनले फेसबुकका फाइदा बुझेपछि आमाबुवालार्ई मोबाईल किनिदिन ढिपी गरिन् ।
छोरीले मोबाइलको जिद्दी गर्न थालेपछि आमाबुवाले मोबाईल किनिदिए । उनले तिनै दाइ पर्नेलाई फेसबुक खोली मागिन् । फेसबुक आइडी खोदिने दाइले आइडी र पासवर्ड आफूसँगै राखे । पछि उनलार्ई थाहै नदिई उनको फेसबुक आफै चलाउन थाले ।
उनी फेसबुक चलाउन पाउँदा पहिले निकै दंग परिन् । तर उनको फेसबुकमा दिनहुँ नराम्रा भिडीयो, फोटा राख्ने, च्याट गर्दा नराम्रा शब्दको प्रयोग गर्ने गर्दा उनलार्ई सबैले यस्ता फोटा फेसबुकमा किन राखेको भन्दै म्यासेज गर्न थाले । उनले आफूले कुनै नराम्रा भिडीयो, फोटा नराखेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन थालिन् ।
यो कुरा थाहा भएपछि सीवीन नेपालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा खबर गर्दा जिल्लाबाटै न्याय पाउन नसकेको सिविन नेपाल ७ नम्बर प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक माधब लोहनीले बताए ।
इन्टेर प्रयोगकर्ताबाट भइरहेको साइबर क्राइम बढ्दो भए पनि उजुरी दिन र न्याय पाउन निकै झन्जट रहेको उनले बताए ।
जिल्लाबाटै साइबर क्राइमको उजुरी गरे पनि न्यायका लागि काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यताले बालिकाले अझै न्याय पाउन नसकेको उनले बताए ।
बढ्दो अपराध, फितलो कानुनः अधिकारकर्मी लम्साल
पत्रकार एवं महिला अधिकारकर्मी अमृता लम्साल पछिल्लो समयमा फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट महिला असुरक्षित हुँदै गएको बताउछिन् ।
अमृता लम्साल, अधिकारकर्मी
महिलाको फोटो काटेर नांगो तस्बीर बनाइदिने, फोटो चोरेर दुरुपयोग गरिदिने लगायतका समस्याले महिला असुरक्षित हुँदै गएको उनले बताइन् ।
‘सामाजिक सञ्जालमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने थाहै नपाई महिलाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालेपछि झनै समस्या भएको छ’ उनले भनिन् । उनले आफू पनि सामाजिक सञ्जालको सिकार भएको अनुभव सुनाइन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट दिनहुँ अपराधका घटना बढ्दै गए पनि रोकथामका लागि उपलब्ध कानुन फितलो भएको भन्दै कडा कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको लम्सालले बताइन् ।
साइबर क्राइमबाट सबैभन्दा बढी पीडित महिला भएकाले उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
उजुरी दिन राजधानी आउनु पर्दैनः नविन्द्र अर्याल, प्रहरी उपरीक्षक
अपराध अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक नविन्द्र अर्यालले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको बताए ।
फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरदेखि लिएर इमेल समेत ह्याक गर्ने क्रम बढेकोले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फोटो अरुले नसोधेर प्रयोग गरेमा, अश्लील शब्द प्रयोग गरेका नराम्रा भिडीयो, फोटाहरू पठाएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिनसक्ने अर्यालले बताए ।
नविन्द्र अर्याल, प्रहरी उपरीक्षक, सीअाइबी
प्रहरी, अदालतमा उजुरी गर्नेहरू प्रमाण बिना नै आउने गरेकाले पनि न्याय दिन समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
कानुनले प्रमाण खोज्ने भएकाले आफूलार्ई आएका अपशब्द, भिडीयो, फोटा वा अन्य कुनै पनि कुरालार्ई स्क्रिनसट गरेर राख्न उनले आग्रह गरे ।
साइबर क्राइमको उजुरी नजिकैको प्रहरी कार्यलयमा दिन सकिने भन्दै अर्यालले यसका लागि राजधानि मै आउन नपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय प्रेमीहरूले पासवर्ड साट्ने क्रम बढेको र घटनामा महिलाहरू धेरै पीडित हुने भएकाले सचेत रहन उनले आग्रह गरे ।
सिंगो समाज नै बद्नामः सञ्चारमन्त्री बास्कोटा
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा संविधानले दिएको स्वतन्त्रतो जनताले दुरुपयोग गरिरहेको बताउछन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट महिलामात्रै नभएर सिंगो समाज नै बद्नाम हुने डरलाग्दो स्थिती सृजना भइरहेको उनले बताए ।
गाेकुल बास्काेटा, मन्त्री, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार
सामाजिक सञ्जालकै कारण कतिपयले आत्महत्या समेत गरेको पाइएकाले यस्ता कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नगर्न नयाँ पूस्तालार्ई ज्ञान र प्रयोगकर्तालार्ई सचेतना दिन आवश्यक छ’ सञ्चारमन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘कानुनले सबैलार्ई समान व्यवहार गर्ने भएकाले सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।’
यस्तो छ इन्टरनेटबाट अपराध
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १३३७८०६३ (४५.६३) छ । मोवाइल मार्फत ३५.६६ प्रतिशत, केवल मार्फत– ८.८९ प्रतिशत र ताररहित १.१२ प्रतिशत गरी ४५.६३ प्रतिशत मानिस इन्टरनेट चलाउँछन् ।
करिब ८५ लाख (एकतिहाइ) नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् । त्यसमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बारेको अनुसन्धानकर्ता उज्जवल आचार्यले बताए ।
प्रहरीका अनुसार दैनिक ८ देखि १० घटना सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेका छन् । ती मध्ये करिब ८० प्रतिशत फेसबुकको माध्यमबाट हुन्छ । त्यसपछि युट्युब, इन्स्टाग्रामबाट पनि घटना भइरहेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार आ.व. २०७४\_०७५ को ६ महिनामा ६ सय ७६ जना सामाजिक सञ्जालबाट पीडित बनेका छन् । जसमा ४ सय ४८ जना महिला छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३\_०७४ मा ३२ उजुरी परेकोमा २७ र आर्थिक बर्ष २०७४\_०७५ ६८ उजुरी परेकोमा ५० मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा दुई आर्थिक वर्षमा फेसबुकबाट ६८ उजुरी परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३\_७४ मा २८ उजुरी परेकोमा ३ मुद्दा अभियोजनमा गएको, १ जना धरौटीमा थुना मुक्त, १ जना धरौटी रकम तिर्न नसकी थुनामा र १ जना पुर्पक्षमा छन् । अन्यको नक्कली फेसबुक बन्द गराईएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४\_७५ मा ३६ मुद्दामा १४ मुद्दा अभियोजनमा गएको, ८ जना धरौटीमा थुना मुक्त, ३ जना फरार र १ जनालाई कैद भएको छ भने अन्यको नक्कली फेसबुक बन्द गराईएको छ ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ ले विद्युतीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलार्ई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालार्ई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलार्ई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलार्ई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको हो ।
विद्युतिय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलार्ई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलार्ई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै दफा ४७ को उपदफा (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ भनि लेखिएको छ ।
यसै विषयमा छायांकन गरिएको सञ्चारिका समूहको कार्यक्रम ‘समकोण’ आज राती ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदैछ ।